Hussein Warsame: Sax maahan in Farmaajo laga codsado inuu ka tago Madaxtooyada - Axadle – Axadle
Hussein Warsame: Sax maahan in Farmaajo laga codsado inuu ka tago Madaxtooyada – Axadle
By Abdiwahab Ahmed	 On May 4, 2021
Muqdisho (RBC) – Finalka Maxamed wuxuu wajahayaa cadaadis mana ku dhegan yahay looga taliyey Villa Soomaaliya ka dib markii uu soo gabagabeeyay koox xileedkiisa ah.
Xiisada ka dhalatay doorashada ka dhanka ah Farmaajo ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii Baarlamaanka uu ansixiyay muddo kordhin aan sharci aheyn, taasoo markii dambe la hakiyay horaantii todobaadkan.
Farmaajo ayaa sidoo kale lala xariirinayaa inuu ka guurayo Villa Somalia kadib qalalaasihii ugu dambeeyay ee ka dhacay Caasimadda Muqdisho ee ka dhashay kordhinta, in kasta oo xiisadihii hada ay yaraadeen, hadana Muqdisho ayaan wali ka saarin ciidamadeeda ilaalada xaafadaha qaar.
Ma la joogaa xilligii madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ka tagayo Villa Soomaaliya, sida ay dalbanayaan musharraxiinta mucaaradka?
Prof. Wareysi uu siiyay VOA-da, Hussein Warsame, oo bare ka ah Jaamacadda Calgary ee Canada, wuxuu ku sheegay in aysan jirin astaamo muujinaya in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu dhaqaaqi doono.
Professor-ka ayaa isbarbar dhig ku sameeyay waqtiyadii Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, ee madaxtooyada joogay markii uu dhamaaday waqtigoodii, mana lahayn xaq uu Farmaajo ku baxo hadda.
Xaq uma lahan (inuu ka tago Villa Somalia) maxaa yeelay madaxweynaha waqtigiisu waa ka dhammaaday, laakiin ma ahan markii ugu horreysay taariikhda ee madaxweyne is-casilayaa uu sii joogo Villa Soomaaliya, ”ayuu yiri.
Kadib sanad iyo badh bay u kordhiyeen Sheekh Shariif. Xasan Sheekh laftiisu xoogaa ayuu kordhiyay, laakiin ma badin, waxayna sii joogeen madaxtooyada, marka su’aashu way tagtay, maxaa yeelay wuxuu la mid yahay madaxweynayaashii hore. “
Professor-ka ayaa ugu dambeyn soo dhoweeyay la wareegitaanka Rooble ee arrimaha doorashada iyo amniga, oo uu dhawaan ku wareejiyay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, ka dib markii muddo kordhinta aysan soo marin.
Hoos ka dhagayso codka Xuseen Warsame.
8 gamers Jose Mourinho will positively signal for Roma this summer season
Sam Johnstone a summer season vacation spot